Louisa May Alcott. Dzimwe nyaya zhinji kupfuura Vakadzi vadiki | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Vechidiki Mabhuku, Novela
Louisa May Alcott akashaya pazuva rakaita nhasi kubva 1888 zvichienda mberi Boston, mazuva maviri mushure mekufa kwababa vake. Uyu munyori weAmerica nderimwe remazita makuru eiyo vechidiki zvinyorwa wenguva dzose. Nhoroondo yake inozivikanwa pasi rose ndeye Vakadzi vadiki, asi kugadzirwa kwake kwaive kwakakura kwazvo uye airidza mamwe marudzi. Izvi ndizvo dzimwe dzenyaya dzakawanda iyo yaakanyora zvakare, kunyangwe ivo vakafukidzirwa nezviitiko zveJo March uye hanzvadzi dzake.
2 Musikana wechinyakare
3 Kuseri kwemask
4 Pasi pemalilacs
5 Varume vadiki
6 Makunakuna masere
7 Mermaid diki
8 Ngano yemukoti
Baba vake vakapuruzira mapendekete neshamwari senge Ralph Waldo Emerson naHenry David Thoreau, saka Louisa angadai asina kuve nezvakanaka zvinyorwa zvekutenderedza. Asi mhuri yake yaisagara muhuwandu uye aifanira kushanda mukati mabasa akasiyana kubva padiki kwazvo kusvika paakazotanga kurarama pane zvaakanyora.
Uye akazviita kubva kumativi maviri akasika echisiko: chimwe chakanangwa nacho vakadzi vechidiki uye yakasimbisa iyo tsika dzechinyakare, sezvazvinoitika mu Vakadzi vadiki o Vakomana vaJo; uye mumwe wacho, mukuru kwazvo, aisanganisira nhevedzano yemanoveli yerudo mhando yaakaburitsa pamwe chete naye zita rekunyepedzera re AN Barnhard, kuwedzera kune rakakomba basa revakuru rakadanwa Mephistopheles emazuva ano (1875).
Yaive zvakare yakanaka mudziviriri wekodzero dzevakadzi akasvika kumagumo ehupenyu hwake abolitionist. Aya ndiwo manhamba manomwe ake.
Polly Milton, musikana munda ane makore gumi nemana ekuberekwa, anoenda kuguta kunopedza mwaka neshamwari yake Fanny shaw. Ikoko Polly anofadzwa nekusiyana kwakaita hupenyu hwaFanny kubva kwaari, nekuti Fanny anogara ari mufashoni uye anoda kutamba nevechidiki. Polly achasangana nevanhu vezera rake, kuenda manheru yemitambo, uye kudzokera kumba achifunga izvo hupenyu hweguta hwakanaka, asi hazvisi zvese.
Makore matanhatu gare gare Polly dzokera kuguta kugara pamba pa Mai Mills semudzidzisi wemimhanzi. Ipapo, Tom, Mukoma waFanny akavimbiswa nemukadzi wechidiki asina hushamwari uye anoda chinzvimbo. Fanny anoda murume wechidiki anonzi Sydney, uyo anokwezvwawo naPolly, asi Ndiani anonyatsoda Polly?
Tiri kuEngland muna 1866. Vechidiki uye demure Jean muir anosvika kuimba yepamusoro ye Coventry kushanda se governess. Kutenda kune hunyanzvi uye hunyanzvi hwakawanda, mushure mekushanda kwezuva rimwe chete inokwanisa kukunda rudo of the Mai Coventry, mwanasikana wake Bella, gotwe, Edwarduye changamire John, sekuru vekare nevakapfuma.
Asi hazvina kufanana naGerald, mukoma, naLucia, hama yakeuyo vanovimba nevanoenda uye ivo vanotanga kushora nhanho dzavo. Zvisinei, Chinangwa chaJean kuchengetedza murume akapfuma uye akapfuma, uye haazeze kushandisa zvombo zvese zvevakadzi pamunwe wake semasikisi ekuhwanda kumashure kuti azviite.
Ruzivo rwevadiki panotaurwa nezvezviitiko zvemwana Ben brown apo, kana uchifamba uchibva ku sekasi kwaaishanda, ne Sancho, imbwa yako akadzidziswa, sangana nevamwe hanzvadzi diki iyo inotamba pasi pemalal. Ben achashanda semudzidzisi uye zvichaitwa shamwari yevagari vemosezvaari kutarisira baba vake vachadzoka vakamutorera. Paanenge achirarama mhando dzese dzezviitiko.
Iyi ndiyo kuenderera ku Vakadzi vadiki uyo anotiudza zvinoitika kana Jo Baher, asina kuroorwa Kurume, uye murume wake vanovhura imba yekudzidzisa nekutarisira vakomana vadiki. Iri iboka revamwe vakomana vane hukasha asi vane moyo wakanaka vanonyatsochinja hupenyu hwemhuri yese yeBaher, kusanganisira nevana vavo vaviri vadiki.
Saka isu tine Franz, ane makore gumi nemanomwe mukomana weGerman, Emil, anonzi "El Comodoro" nekuda kwekuda kwake kugungwa, Pakati-Brooke, akangwara uye anofara, ba, vasina zororo, Dick, Iyo Hunchback, Dolly, anondandama, anonyengera uye anokara Jack, Ned Barullo Bakeranodheerera uye asina hanya, George, zampabollos, Billy, vasina mhosva, Tommy, ane misikanzwa, ane mamvemve uye mutsva Nat, uyo anozobatanidzwa neane hasha uye asinganzwisisike Dan. Ivo vese vanogara kuPlumfield Chikoro uye Jo anozotarisira kuvashandura kuva varume vebatsiro.
Iyi imwe yeiyo mabhuku mazhinji anozivikanwa yeAlcott uye inozivikanwa se Vechidiki. Iyi ndiyo nyaya yemukadzi mudiki Rose Campbell, uyo anodzoka kumba mushure merwendo rwemakore maviri kutenderera pasirese nababamunini vake Alec nemurandakadzi wake Phebe. Asi pakudzoka kwake anoona kuti ndizvo muridzi wehupfumi hwakawanda.
Saka nekukasira anozviwana azungirwa ne huwandu hukuru hwevanoyemura nevapfuri. Rosa achafanirwa kusarudza ramangwana rako richava rakadii uye sarudza kuti ndeupi weshamwari dzake nehama dzevanun'una vanonyanya kumufarira kwete pfuma yake.
Ichi ndicho kusarudzwa kwenganano ngano uko Alcott anotiratidza kuti anga ariwo piyona uye munyori mukuru wenyaya uye goths. Mune aya ma protagonists ari nyowani, undines uye nereids nezvimwe zvisikwa zvegungwa. Semuenzaniso, tine nyaya senge Ariel, Rizo, gungwa nymphkana Shamwari diki yaFancy.
Vanenge vese vanogovana zvinhu zvechiitiko chimwe chete se chitsuwa, imba yekuvhenekera, hotera kana dzimba dzemahombekombe, pamwe yakafuridzirwa na Nonquit, uko Alcott akazorora pamhenderekedzo yeNew England.
Nyaya iyi inotaurwa kate snow, mukoti (sezvaive iye munyori iyeye) uyo anoshandirwa kuchengeta Elinor, mwanasikana mudiki pane Carruth mhuri, uyo anotambura nechirwere chepfungwa chinoshamisa. Kubva panguva yekutanga Kate achaedza kunzwisisa kuti sei jaya iri Robert steele, anofungidzirwa shamwari yemhuri, anochengeta a kudzora kwakazara kunyanya zvinoitika kumba kweCarruth.
Ndicho yechokwadi labyrinth yekunyengera, zvakavanzika uye zvishuwo iyo ine kuguma kunoshamisa. Tinogona kutaura kuti inoverengeka na quasi-mapurisa kunyengera nezvekutukwa kwerudzi uye nekuyeuchidza zvakawanda nezwi uye kumashure Wilkie Collins, hanzvadzi dzaBrontë kana Jane Austen.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Louisa May Alcott. Dzakawanda dzimwe nyaya kupfuura Vakadzi vadiki
Agatha Christie: zvinyorwa zvekuda kuziva zveGreat Lady yeChipara.